Documents xasaasi ah: Wasiir Bayle oo musuq-maasuq daran lugaha kula jira | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Documents xasaasi ah: Wasiir Bayle oo musuq-maasuq daran lugaha kula jira
Ku: Ra’iisalWasaaraha JFS,
Ku: Guddiyada ArrimahaDibedda iyo Maaliyadda ee GolahaShacabka,
Ku: Hantidhawrka Guud ee JFS.
Ku: Wasaaradda Maaliyadda
Ku: Waxgaradka iyo Shacbiga Somaliyeed meel ay joogaanba
Ujeeddo: MUSUQMAASA IYO MAS’UULIYAD XUMO AAN HORE LOO ARAG OO KA SOCOTA WASAARADDA ARRIMAHA DEBEDDA EE SOMALIYA
(BARO WASIIR BAYLE BOGGIISA KALE)
Wasiirka Wasaardda Arrimaha Debedda ee JF Somalia Abdiraxman Bayle oo hore u ahaan Sarkaal ka tirsanaa Banka Horemarinta Africa, qaybta Beeraha oo loo magacaabay Wasaradda Arrimaha Dibedda kaddib markii Ra’iisal –Wasaaraha JF ee Somalia Mudane Abdiweli Sh. Ahmed la magacaabay ayaa aad looga dayrinayaa falal naxdin iyo argagax leh oo uu kula kacayo Wasaaradda Arimaha Debedda iyo shaqaalaheeda gudo iyo debedba.
Maqaalkan oo caddaysiimahiisa watta, xaashiyaha halkan ku lifaaqan waxaa ku cad waxyaalaha Wasaardda Arrimaha Dibedda ka socda, oo ah wax lagu tilmaami karo dal iyo dad nacayb, aarsi iyo colaad aan loo aabbo yeelin. Wasaaradda waxaa ka dhaca dunuub argagax leh , xuduud kasta oo sharcina Wasiir Bayle wuu jabiyay
Wasiir Abdiraxman Bayle oo muddo 8 bilood oo kali ah hayay xilkaas ayaa muddadaas fuliyay tallaabboyin aan hore loo maqlin , loona arag oo ah burburin Wasaaraddii Arrimaha Dibedda ee loo igmaday ee intaan la magacaabay uu hore u mar weyni ku socday. Iyadoo Wasaaradda Arrimaha Dibedda ay soo mareen Wasiirro hore oo rag iyo hawenba isugu jiray, wakhtigii uu Wasiir Bayle xilka qabtay Wasaaradda hore u mar xawli ah ayaa kasocday gudo iyo debedba, sida ay caddeeyeeen xubno ka trisan Wasaaradda oon rabin in la magacaabo.
Wuxuu had iyo jeer ku celceliyaa fassax sannad ah ayaan soo qaatay waanan tagayaa. Wuxuu caddaalad darro, musuq-maasuq iyo xatooyo maalkii qaranka , eex iyo qabyaalad aan geedna loogu gabban ku hayaa Safaaradihii iyo Waaxyahii Wasaaradda. Qofkii uu is yiraahdo shaqo ayuu garanayaa gudo iyo debedba wuu beddelaa. Projectyadii qiimaha lahaa sida kii Isgaarsiinta sirta (Secure Communication center) ee Dawlladda Turkigu ugu deeqday Wasaaradda Arrimaha Debedda oo lagu qiimeeyay $640,000 oo loo tababaray shaqaaleh ayuu joojiyay isagoo sheegay inaanu muhiim ahayn. Mashruucaas ilaa hadda dawlladaha hore u maray ayaa leh , Turkiya waxay u samaysay Somalia iyo Afqanistan kaliya. Shaqaalihii shaqadii wuu ka joojiyay islamarkaana looma baahna ayuu yiri. Waxyaalaha uu ku kacay waxaa kamida inuu Safiirada iyo Sii hayeyaasha uu ku amrro amma kula gogortamo lacagaha la siiyo inoo qaybiya.
Wasiir Bayleh muddadii gaabnayd uu joogay wuxuu eryay laba Xoghaye Joogto oo labaduba ah rag ixtiraam iyo aqoonba leh. Markii aanu u kuur galnay, waxaannu helnay in sababtu tahay inuu siduu doonayo uu u maamusho Wasaaradda oon cidina wax ka odhan. Tayadii shaqada, moraalkii shaqaalaha iyo hawl maalmeedkii wasaaradda intuba meesha way ka baxeen. Waxaannu la hadalnay ilaa 16 qof oo Wasaaradda ka shaqeeya. Waxaa noosoo baxday inaanu joogayn oo rabo inuu dhawaan is casilo iyadoo wakhtigii uu qabsaday dhaw yahay, isla markaana uu rabo inuu Bangigiisii ku nqodo , isla markaana uu dhaqaale uruursi xaaraan ah ku jiro, taas awgeedna aanu cidna wanaag iyo xurmo u hayn. Isagoo inta badan maqan markuu yimaaddo Wasaarrdda wuxuu had iyo jeer u sheegaa shaqaalaha inuu iska tagayo haddii wuxuu rabaa socon waayaan.
Baadhitaan dhaba oo qoto dheer markii aannu u kuur galnay waxaa noosoo baxay arrimaha soosocda:
In dayn aad u faro badan Wasaaradii la galiyay, iyadoo aan la biixinayn biyihii, korontadii, baatroolkii iyo kharashaatkii Wasaaraddu u baahnayd oo marka loo bixin waayo si joogto ah biyaha , korontada iyo Internetkaba laga jaro. Wasaaradda wax wax lagu qoro iyo stationariga lama helo. Isla markaana waxay si joogto ah Wasaaradda Maaliyaddu ay lacagta joogtada (Running Costs ) oo ah kharashyada loogu talo galay inay bixiso, laakiin ay lacagtaasi gasho jeebka Wasiirka iyo dhallinyaro uu keensaday oo u dhiibay meelaha muhiimka u ah si uu dhaqaalaha u melmarsado. Dhammaan dhallintaasi waxay muddo wiigag ah ku wada iibsadeen Baabuur cusub, marka madaxdii kale ee wasaaraddu aylugaynayaan.
Wasiir Balyle sida halkanku cad wuxuu Wasaaradda galiyay dayn faro badan, waxaa kamida
Dayn uu ku gattay qalab guri oo dhan $95,500, oo ay gogoshay Sharikadda “ Khayraad Furniture”. Taasoo aanay Wasaaraddu qaadi karin ,isla markaana uu ku naas -nuujinayay dad gaara. (Saddexdii wasiir ee ka horreeyay midna qalab ka madhigan Wasaaradda), marka uu Bayle $95,500 oo dayn ah galiyay Wasaaradda, mushaharka shaqaalaha qaar baan heli jirin. Wasaaradda waxaa laga la’ yahay caddaalad iyo tixgelin baahida shaqaalaha iyo u nixid Wasaaradda.
$72,000 oo uu ka qaddimay kiro 12 biloodoo min $6000 bishiiba guri uu ka kiraystay xaafadda Madaxtooyada isaga oo isla markaana uu muddo dhawr bilood ah ku jiray hoteelka Al Jaziira. (Guryaha xaafaddaas waxaa lagu kireeyaa $3000).Waxaa la tuhun san yahay in lacagta lala qaybsado dadka guriga leh.
$68,950 oo uu ku bixiyay Hotel Al Jaziira iyadoo uu gurigii uu kiraystayna uu dajiyay skartii u shaqaynaysay,Lacagtaas sida ku cad caddaymaha halkan ku lifaaqan intabadan waxaa lagu bixiyay kharash ay galeen dhallinyaro uu Wasiirku dajiyay hotel Al Jaziira oo ay qaraabo yihiin. Al jaziira qaansheegatooyin -kooda halkan ku lifaaqan , waxaa ku cad in Ayuub oo gacan- yarihiisa ah, maalintiiba iskucelcelin laga bixinayay $350 ilaa $400, iyadoo aan shaqaalaha mushaharka bishii $300 ah aan la siinayn.
Sida caddaynta halkan ku lifaaqan ku cad, Wasiir Bayle wuxuu amray in gunnooyinkii safaarado dhan lix oo ah $242,000 in lagu wareejiyo xisaab u khaasa, taasoo isaga kaligii uu qaadi karo amma isticmaalikaro; (eeg lifaaqa) Safaarodahaasi waa: Qatar,Liibiya,Russia,Oman, Paris, South Africa, sidaku cad lifaaqyada halkan la socda. Safaaradaha, Libiya, Russia South Africa iyo Paris waxay kamid yihiin kuwa ugu liita ee dhibaato dhaqaaleh oon cidina ka caawin karin ay haysato.
Waxa kale oo uu ku dhawaaqay inuu xirayo safaarado ay kamid yihiin Germany , Maleesiya, Tanzania, Burundi, Ruwanda iyo dhawr kale. Safaaradahan oo kamida kuwa ugu muhiimsan waxaa qaarkood ku yaalla guryo uu rabo inuu iibsado.
Waxyaalaha ugu foosha xun ee uu sameeyay Wasiir Balyle waxaa kamid inuu Dawlladda Maleesiya u qoray inuu Safaaradda xiray, isagoon haba yaratee aan xurmayn Safiirkii joogay oon u sheegin taasoo ay dawlladda Maleesiya u sheegtay Safiirka in safaaradda la xiray. Waa fool xumo magaca dawlladda iyo diplomaasiyaddab auu u soo jiiday.
Safaaradaha uu ku dhawaaqay inuu xiro wuxuu gunnoyinkooda ugu talo galay inuu dayman uu galay oo ku baxay dhallinyaro uu hoteelka Jaziiray dajiyay inuu ku bixiyo . Eeg lifaaqyada halkan ku lifaaqan iyo sida lacagahaas ay u isticmaaleen isaga iyo Ayub Ismaciil oo ah gacan yaraha Wasiir Bayle, markii ay dagganaayeen Jaziira hotel. U fiirso kowda bisha March, 2014, Hotel Jaziira, qolka 408 oo uu dagganaa Ayub Ismaciil kharsha yada ku baxay oo isgu jira casuumado uu ku qabtay iyo qolal uu ku kireeyay $250 iyo weliba kuwa uu dad kale isla maamlamaha qaarkood dajiyay. Sida la xaqiijiyay ,markii la weydiiyay, wuxuu Wasiirku yihidhi anaa bixinaya, hase yeeshee safaardihii ayuu ka jaray lacagahaas si uu u bixiyo.
Lacagtii DawlladdaTurkigu ugu deeqdo Wasaaradda oo dhan $25000 oo dollar bishii waxaa loogu talo galay in lagu shaqaaleeyo dad badan oo Wasaaradda ah, iyadoo kash ah (Cash) ayaa loo keenaa Wasiirka ,khasnadda dawlladda kuma dhacdo, sida caddaymo la hayona dhamaan lacagtaas waxna wuu qaataa, waxana dhallin yaradaa u keensaday ee ehelkiisa ah ayaa la siiyaa, dadkii kale ee qaadan jiray waxna wuu eryay, waxa lacagtii ayuu ka jaray.
Magacyada dadka lacagtaa qaata oo dhammaantood Ehelkiisa ah waa kuwan hoos ku qoran.
Ayub Ismail Yusuf
Liban Cabdilahi Absiye
Omar Arab Ibrahim
Wasiir Bayle wax yaalaha uu sameeyo waxaa kamida inuu Safiirrada iyo Sii hayeyaasha khasab kaga qaado lacag isagoo ku shubta Account aan cid kale la isticmaalin., xisaab celinna aanu samayn marna. Safaardahu waxay leeyihiin $40,000 saddexdii biloodba, hase yeeshee wuxuu ka qaadaa 100/30 ilaa 100/50. Lacagahaa waxaa u qaada Siyad Barkhadle, oo ah gacan yarihiisa uu adeerna u yahay ( eeg jeegaga ku lifaaqan halkan ee ah lacagaha uu soo qaado marka laga jaro lacagaha uu la haro.
Safaaradaha uu lacagaha ka goosaty lama wada hayo nuqulka jeeggagooda, waxaase kamid inta la hayo caddaymahooda:
SafiirkaPakistan wuxuu Wasiir Bayle kula heshiiyay inuu ka goosto $20,000 (Safiirkaasi muddo lix sano ah ka hor ayaa laga beddelay Pakistan wuxuu ku qoran yahay Madaxtooyada , haddana lacagta gunnoda Xamar ayuu ku qaataa)
India wuxuu ka goostay $18,000
Kuwait wuxuu ka goostay $12000 ( eeg Cheegga lifaaqa ah)
Sii hayaha Safaaradda Ciraaq wuxuu ka goostay $5000
NY wuxuu ka goostay $18,000
Imaaraadka Carabta $10,000
Safaradda uu ka goostay $9000 magaceeda lama hayo ilaa hadda (Eeg Jeegga Tiro 083)
Safaardaha Germany iyo Dooxa weli waxba uma oggolaan ilaa ay sheegaan inta ay siinayaan.
Tirada safaaradaha uu kala haro lacagta way badan yihiin, welina way socotaa baaristi.
Safiirka Nairobi sida ka muuqata nuqul jeegga halkan ku lifaaqan , waxba lagama jarin, isagoo ka cabsi qaba, sida la sheegay.
Wasarradda Maaliyaaduna way ogtahay nasiib darrose Wasiirka Maaliyadda ayay wada baashaalaan, sidaas awgeedna waxba looma diido.
Lacagaahasi way ka baxaan Wasaaradda Maaliyadda, Safaaradahan waa lagala haraa, khasnadda dawlladana kuma noqdaan
Ku xadgudubka xuquuda shaqaalaha iyo eexda
Wasiir Bayle kuma dhaqmo shuruucda Wasaardda u taalla ( Foreign Service Law) Eex , Qabyaalad iyo Musuqmaasuq aan xad lahayn ayuu kula dhaqmaa shaqaalaha Wasaaradda. Mooral dil iyo dullaysi ayay isga iyo dhallinta uu keensaday ay madaxda iyo shaqaalaha wasaradda ku hayaan amma kula dhaqmaan.
Wasiir Bayle wakhtigii uu yimid ilaa hadda oo dhan 8 bilood ,wuxuu qoray shaqaaleh dhan 22
Kuwaasoo dhammaan ah ehelkiisa’ sida kuwo uu adeer ruma u yahay, kuwo ay ilmaadeer yihiin iyo kuwo ay ehel dhow yihiin. Wasiirku dadkaas uu qoray 5 kamida way katageen kaddib markii ay vise-yaal qaateen. Dadkaas badidooda wuxuu ku baddalay dad uu amma eryay amma shaqo la’aan kadhigay. Dhibaatooyinka uu Wasaaradda iyo shaqaalaha ku hayo waxaa kamid in isaga iyo dhallinyaradaas uu keensadayay ay tahdiid, gumaysi, niyad jab iyo cagajuglayn ku hayaan shaqaalihii Wasaaradda ee Sare iyo kuwii kaleba.
Wasiirku wuxuu si joogta ah u wacaa Safaardaha oo ku amraa inay dad gaar ahi soo noqdaan oo lasoo celiyo si uu ugu baddalo dadkaa ehelkiisa ah, iyadoo uu ehelkiisa uu dhamaan ballanqaadyo siiyay inuu debedda u baddalo. Sidaa qaar kamida ayaa noo sheegay. Isagoo iskii isu casilaya, haseyeeshee uu dadkaas meelayn doono intaanu tagin. Siday noo sheegeen dad Wasiirka ehel u ah, Wasiirku wuxuu tele-conference kula hadlay 17 qof oo qabiilkiisa ah oo kala jooga dalal badan oo Ingriiska, Canada, Maraykan, Kenya iyo Sweden ku jiraan, isagoo u sheegay inay ka go’antahay inuu reerka Samaroon ee uu ka dhashay uu ka shaqaalaysiiyo Wasaardda Arrismaha Debedda iyo Hay’daha Caalamiga ah, intaanu shaqada ka tagin ka hor. Wuxuu ka codsaday inay soo diraan wixii ay CVyo hayaan, si dhakhso ah.
Dadka uu shaqada qoray dhawaan ee ehelkiisa ah waxaa kamida;
Siyad Cige Barkhadle Chief of Staff
Ayub Ismail Yusuf Protocol officer
Mohamed Cabdilahi Aden Madaxa Xisaabaatka Gudaha
Abdulahi Sahal Farax
Abdisalam Ibrahim Mohamud
Khadra Hassan Nuuh
Fardawsa Abdirahman Ahmed
Sado Mohamed Yusuf
Liban Abdilahi Absiye
BasmaDahir Muse private secretary
Dhammaan dadka ay warbixintani u socoto iyo dadka dalka danaynaya waxaannu ku baraarujinaynaa in si degdega WasiirCabdiraxman Bayle looga qabto dalka oo uu dhibaatada ku hayo, sharcigana lala tiigsado. Isla markaana ogeysiis la siiyo Bangiga Hore u Marinta Afrika.
Hay’adda Shaqaalaha ee Madaxa bannaan (Civil Service Commission) Waxaannu ogeysiinaynaa inuu qorayo qoyskiisa oo kali ah, aanay cadaalladi jirin, sidaa awgeedina ay ka fiirsadaan dadka uu qorayo.
Ugu dambayn wax yaalaha uu sharafta qaranka ugu dhimayo waxaa kamida , inuu haween kala duwan u kaxaysto saffarada kuwaasoo ay kamid yihiin qaar kamida shaqaalaha wasaaradda iyo kuwo kaleba oo uu Shirarka geeyo kuraasida calanku saran yahayna fadhiisyo ( eeg sawirkan , Haweenayda halkan ka muuqataa kama mid aha WAD ).
Eeg lifaaqyadan hoose.